CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 180214 | CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးအင်တာနေရှင်နယ်
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, Tuesday180918
စက်တင်ဘာ 19, 2018 | Uncategorized, Wod
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, သောကြာနေ့, 180907
စက်တင်ဘာ 7, 2018 | Uncategorized, Wod
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, အင်္ဂါနေ့, 180904
by CrossBox ကြံခိုင်ရေး | စက်တင်ဘာ 4, 2018 | 0
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, တနင်္လာနေ့, 180827
by CrossBox ကြံခိုင်ရေး | သြဂုတ် 27, 2018 | 0
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, ကြာသပတေးနေ့ 180816
by CrossBox ကြံခိုင်ရေး | သြဂုတ် 16, 2018 | 0
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 180214
Posted by ကို CrossBox ကြံခိုင်ရေး | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2018 | 0
Wojska Polskiego 55 Olesnica 56-400
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေး 180213ရေခဲ
သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း 1800m Run ကို
ခွန်အား EMOM 103Touch နဲ့ Go ကိုပါဝါလစ်သုတ်
WOD 30 ဘား Burpess ရင်ဆိုင်ခြင်း
CrossBox လက်ဝှေ့ 180213 ဒင်္ဂါး 6
4 Round9တောင်တောင်တက်သမား6Push ကို ups3Burpees
6 - 30 ကြိုးခုန်ခြင်း Sprint
WOD3Round 1 မိနစ်ထိုး Burpess6ဒုတိယအအနားယူ 1 မိနစ်ထိုးလက်ဝါးကပ်တိုင်6ဒုတိယအအနားယူ 1 မိနစ် Burpees6ဒုတိယအအနားယူ 1 မိနစ်ထိုးလက်ဝါးကပ်တိုင်6ဒုတိယအအနားယူ
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေး Interantional ကဘာလဲ
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးအင်တာနေရှင်နယ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, သင်ကြားရေးဘာသာစကား, ပထဝီနှင့်အဆင်းကိုကွဲပြားစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေး၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ရွယ်တူပူးပေါင်းမှတဆင့်ကို Safe ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အဆက်ပညာရေးဌာနက Universal လျှောက်လွှာ၎င်းတို့၏အပျနှံအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်။ CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်ရေး၏ကမ္ဘာ့ဖလားစုစည်းထားပါသည်။
2018 အတွက် affiliation ရန်သင့်လမ်းကြောင်းကိုအပေါ် Start!
အဆိုပါ CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ် မှစ. Wod ရဲ့မော်ကွန်းတင်ပြီး
by CrossBox ကြံခိုင်ရေး | စက်တင်ဘာ 19, 2018
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, အင်္ဂါနေ့ 180918
by CrossBox ကြံခိုင်ရေး | စက်တင်ဘာ 7, 2018
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, သောကြာနေ့ 180907
by CrossBox ကြံခိုင်ရေး | စက်တင်ဘာ 4, 2018
CrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, အင်္ဂါနေ့ 180904
လွန်ခဲ့သောCrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, သောကြာနေ့, 180209
နောက်တစ်ခုCrossBox ကြံ့ခိုင်ရေးဂျာနယ်: အဆိုပါနေ့၏လေ့ကျင့်ခန်း, သောကြာနေ့, 180216
2017 CrossBox အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ™, LLC ©။ CrossBox, ကြံ့ခိုင်ရေး™အတွက်တစ်ဦးကကမ္ဘာ့ဖလားယူနိုက်တက်,ယူနိုက်တက်ကြံ့ခိုင်ရေး™, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်™နှင့် crossboxfitness.com များအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး™အမေရိကန်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်အတွက်, CrossBox အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ™၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။